Creative Writing » ခင်ဇော် ၏ သည်းခံရခြင်းများ	34
ဒီချုပ်က ကြေငြာစာ၁၀ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၅
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရွေးကောက်ပွဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိကြောင်း အီးယူစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ဝေဖန်
အဖွဲ့က သူတို့တွေ့ရှိချက်တွေကို သတင်းမီဒီယာတွေကို ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ EU အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Alexander Lambsdorff က ကြိုတင်မဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောပါတယ်။
“မိမိတို့ အီးယူအဖွဲ့အနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်အထိ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေရတာက မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေပြင်ပမှာ နေထိုင် တဲ့ ကြိုတင်မဲတွေကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေ့ရှိရတာက ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရမယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်းက ကြိုတင်မဲပေးသူတွေရဲ့ မဲတွေကိုင်တွယ်ရာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်တာကို တွေ့ရပါတယ်”
ဒါ့အပြင် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ အပြင်မှာနေထိုင်သူတွေပေးတဲ့ ကြိုတင်မဲ စာရင်းတွေ အတိအကျကိုလည်း မသိရဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲရုံတွေကို အချိန်မှန်မှန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် မဲရုံမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက အချိန်ပြည့်ရှိနေတာကြောင့် မဲရုံတွေနဲ့ မဲပေးတာဟာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကောင်းမွန်တယ် လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို အီးယူအဖွဲ့က လေ့လာသူ ၁၅ဝ လောက်နဲ့ မဲရုံပေါင်း ၅ဝဝ ကျော် ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: သြော်….ဘွ…ဘွ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to ဇီးကွက်ကြီး
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to ကိုမှန်ကြီး
ကျွန်တော်တို့ မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် ၊ ( ၁ ) သေချာတာ ဒီလို ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးဟာ ခေါင်းဆောင်ကြီးကလွဲလို့ ဘယ်သူမှအမိန့်မပေးနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်ပဲ ၊
( ၄ ) သူရဦးအောင်ကို ကို အလိုမရှိရင် .. ( သို့ ) အရေးယူလိုရင် ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ကြိုက်သလို ဟိုးအစောကြီးကတည်းက ထုတ်ပစ်လို့ ထောင်ချပလိုက်လို့တောင် ရရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ အခုကျမှ ဒီနည်းကို လာ သုံး နေရတာလဲ ! ( ၅ ) ငယ်မွေးခြံပေါက် ဦးအောင်ကိုကတော့ ဒါဘယ်သူ့လက်ရာမှန်း မိမိအကြွေးခံလိုက်ရမှန်း …
ဂျက်စပဲရိုး says: မြင်နေရတာတွေက ဆဲချင်စရာကြီးတွေချည်းပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ ကတော့ စာရင်းရေးထားတယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: သူတို့ လုပ်မှ ဘပြောင်ခမျာ
Ma Ma says: ခုချိန်မှာ သည်းခံခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်နိုင်တဲ့ လက်နက်ပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: သည်းခံပါတယ် ချစ်မ။
pooch says: Me too…
များများစားပြီး အံကြိတ်ထားတယ် သီးခံခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ ရှေ့က ခေါင်းဆောင်က ၂၇ နှစ်တောင်သီးခံလာတာ တို့တွေ သီးခံရတာ မပြောပလောက်ပါဘူး ညစ်စွမ်းရှိသရွေ့ညစ်ကြပါလေ သန်းခေါင်အပြင် ညဉ့်မနက်တော့ပါဘူး
Mike says: Nyo Mar Lwin
ဇီဇီခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/NLDParty/posts/1248626851819380
ဇီဇီခင်ဇော် says: တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို
kai says: ယူရမှာက…
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရမ်းသဘောကျတာက ဘာအချက်ပြီးရင် ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာ ကြိုတွေးထားတာ။
kai says: သမ္မတအထက်မှာနေမယ်ဆိုတာကိုတော့.. အကြိုက်ဆုံး…။
အိုဘယ့်.. နှင်းဆီ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ … စုစုရုန်းရုန်းနဲ့…. အုံးအုံးထ…အောင်ပွဲ သွားခံနေကြတာကိုလည်း..
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့ဒီ လူအုပ်ကြီး ထဲကို ကုလား တစ်ယောက် က နေပြီး အလာဟ် အက္ကဘာ ဆိုပြီး ဝုန်း ပလိုက်ရင် ဖြင့်…..
kai says: အတွက်မမှားရင်.. မဘသဂိုဏ်းနဲ့တပ်မဲတွေကို.. ကောင်တာလုပ် မဲချေဖျက်သွားတာ.. မွတ်စလင်+ခရစ်ယန်မြန်မာတွေပဲ..။
kai says: ကမ္ဘာ့ရွေးကောက်ပွဲတွေထုံးစံပါ…။
မြစပဲရိုး says: တစ်နိုင်ငံလုံး မှာ ပြိုင်ဘက်မရှိ အရည်အချင်း ရှိသူ လူထု (အများစု) ချစ်ခင် ကြည်ညို တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ကို ပိုင်ဆိုင်ထား ပါ ရက် နဲ့
အများစု က ထောက်ခံထားပါရက် နဲ့ သူ့ကို နိုင်ငံ ဦးဆောင်မဲ့ အကြီးအကဲ လို့ တရားဝင် နာမည် တပ်လို့ မရ တဲ့ မြေ ……… နဲနဲ လေး တော့ လွဲ နေတယ်။
kai says: Chancellor .. အဓိပတိပေါ့…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရီးနဲ့ တဂျီးးး၊
မြစပဲရိုး says: အရပ်သား စစ်စစ် လို့ ပြောတော့ထားတာဘဲ ဇီကလေးရဲ့။
ဒါကြောင့်ပြောတာ ကျား တွေများ သံခင်းတမာန်ခင်း နားမလည်ကြဘူး။ အရီး ကတော့ နောက်တစ်ယောက် ကို မိန်းမ တစ်ယောက် တင်စေချင်တယ်။ :-)))
မြစပဲရိုး says: သည်းခံရင်း ရီရီမောမော ဖြစ်ရလေအောင် Facebook ထဲ က ဘီဒီယို လေး မျှဗျစီ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟီးဟီးးးး အရီးရေ ထိချက်။
မြစပဲရိုး says: အရီး လဲ ကိုယ့် FB ထဲ မှာ မြင်နေတယ်၊ မြင်နေတယ်။
naywoon ni says: သူကြီးရဲ့ အ​ပေါ်က ကွန်​မန်းမှတ်​ချက်​လုပ်​ရလို့
kai says: မဲပေးသူ သန်း၃၀ရဲ့.. ၆သန်းဟာ ဟိန္ဒူအပါအ၀င်.. ဘာသာမတူသူတွေဆိုတာတော့ သတိထားကြည့်ပေါ့..။
kai says: အဖွဲ့ချုပ်မဲသွားဆွယ်တော့.. ပျော်ဘွယ်က သံပုန်းတီးထုတ်တယ်…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပျော်ဘွယ်က ဒီချုပ် က ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ညို မဆုံးခင်ကထိ ဒီလိုမဟုတ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: တစ်ဆင့် ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးပါပြီ ခညာ။
အောင် မိုးသူ says: သည်းခံ သည်းခံ